Sidee loo hagaajiyaa "lag" ka dib rakibidda iOS 9 | Wararka IPhone
Ma yara dadka isticmaala ee ka cabanaya xoogaa yar oo yar ama dib u dhac gaar ahaan dhinacyada la xiriira SpringBoard, sida hoos u dhigista Xarunta Xakamaynta, helitaanka Xarunta Ogeysiinta ama aadista Tooska, gaar ahaan shaqadan ugu dambeysa waa halka ay dadka isticmaala ka helayaan caqabadaha ugu badan, waxay umuuqataa in cusbooneysiinta OTA ilaa iOS 9 laga soo qaatay noocyadii hore ee iOS Waxay soo wadaa saf ayaa jira oo waxaa jira boqolaal cabasho, si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in xalka uu yahay mid fudud, in ka badan inta aan qiyaasi karno, faahfaahin ah in yar ay ogaan karto iyo Actualidad iPhone ayaan kaaga sheegi doonaa.
Cusbooneysiinta macruufka ee ballaaran sida kala-guurka ee laga soo bilaabo macruufka 8 illaa macruufka 9, waxaan had iyo jeer kugula talinayaa dib u soo celinta aaladda si hadhow loogu daro keyd, ama doorbideyso soo celinta aaladda nooca ugu dambeeyay ee la heli karo ee iOS u dejiso sidii iPhone cusubMa qaadan doonto wax ka badan wakhti waana sanadkii hal mar oo keliya, taas oo si weyn u kordhin karta waxqabadka qalabkaaga.
Marka hore waxaan sameyn doonaa hubi sida ugu macquulsan ee suurtogalka ah ee aan haysanno ama aan u lahayn dib u dhaca xun, Si loo hubiyo, waa inaan tijaabinaa animations-ka guud ahaan, dhaqaaqida Xarunta Ogeysiinta, Xarunta Xakamaynta iyo soo galida tooska iyadoo la mariyo, baaritaano fudud si loo arko haddii wax yar oo naga mid ahi nagu dhacaan. Haddii aad horay dhib uga soo gaadhay jaranjarooyinkan oo aad u malaynaysid inaadan u baahnayn inaad hubiso, ku sii wad tallaabooyinkan:
Uma jeedno «goobaha«
Marka aad gasho Settings, waxaan aadeynaa «General»Iyo«Gaaritaan«
Marka hore waxaan galnaa «Kordhinta isbarbardhiga«, Si aad u hawlgeliso« darawalkaIska yaree hufnaanta»Iyo« Midabbada madoobaa ».
Adigoon ka tagin Settings, waxaan dib ugu laabaneynaa «Iska yaree dhaqdhaqaaqa»Oo waliba waanu dhaqaajineynaa.
Hadda waa markaan riixno badhanka «guriga» si aan ugu laabanno SpringBoard isla markaana halkaas aan ku xirno dhammaan codsiyada firfircoon ee multitask (adoo laba jeer ku riixaya guriga).
Waxaan dib u cusbooneysiineynaa jeegaggii hore ee Xarunta Xakamaynta, iyo Xarunta Ogeysiinta.
Waxaan mar kale u jeesanaynaa «goobaha»Waxaanna ku dhaqaaqeynaa tallaabooyinka 3 iyo 4 ee soo noqnoqosho ah, waxaan ka fureynaa xulashooyinkaan mar kale inaan uga tagno sidii hore.
Waxaa jira dad badan oo adeegsada goleyaal kala duwan oo ka warbixinaya habkani iyaga ayuu u shaqeynayaa, iyo kuwa kale oo badan oo aan helin wax farqi ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan qaadaa fursad aan ugu mahadceliyo lammaanahayga Artjom Olgovick yaa ku dhuftey furihii kulamadii 9to5mac iyo ilo kale oo lagu kalsoon yahay, waxaanan kula talinayaa kuwa dhib ku qaba dib u dhac yar inay ku dhaqaaqaan talaabooyinkan, wax lacag ah kuma fadhid waadna iska ilaalin kartaa dhibaatooyinkaas yar.
Shaki la'aan malaha sabab kumbuyuutar, waxay umuuqataa in dibudhacaani yar uu sabab u yahay habsami u socodka ku xaniban SpringBoard ama wax la mid ah. Haddii ay adiga kuu shaqeysay, si xor ah noogu sheeg sanduuqa faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo hagaajiyo "lag" ka dib markii la rakibo iOS 9
David B.S. dijo
Runta, waxaan doorbidaa inaan sugo faallooyinka, haddii ay qof u shaqeysay, maaddaama aan cusbooneysiiyey iPad mini oo aan dhibaatadaas haysto oo marka laga reebo dib-u-dhaca markaan qorayo codsi kasta, xalkaygu? Ku noqo macruufka 8.4.1
Jawaab David BS
Waxaan kuu sheegi doonaa: Kadib markii aan cusbooneysiiyo ipad-keyga waxaa la laalaadin doonaa seddexdii marba hal mar waana inaan damiyaa oo aan shidaa. Sug cusboonaysiinta cusub welina sidii bay ahayd. Waxay ila noqotay inaan ka raadiyo Google adoo adeegsanaya ereyga lag iyo ¡Milagro! maqaalkaagu wuu muuqday. Waan sameeyay wax kasta oo aad tilmaamto oo mushkiladda la xaliyay Milyan mahadsanid. Weligay kuma qorin barta internetka, laakiin mahadnaqdaydu waa mid aad u weyn oo waa cadaalad in lagu mahadnaqo Habsiin
sidee loo adeegsadaa macruufka 9 ee ipad 3? Ma jiraa qof rakibay?
Way xumaataa, laakiin macruufka 9.1 way ka sii fiican tahay, waxaan tijaabinayaa beta-ka waxaanan ogaanayaa inay aad uga deggan tahay uguna dheecaan badan tahay qaabka rasmiga ah ee iOS 9.
Ku jawaab Nimus
Waa hagaag, waxaan sameeyay khiyaanada si aan uga saaro dib u dhaca ku dhacay Ipad 3-kayga wayna ii shaqaysay, maadaama aan dib udhacaas lahaa.
Waxaan ku jiraa shaki la mid ah Xavi. Qof kasta oo na siin kara jawaab celin?
Ku jawaab alvarojrh
Waxaan ku rakibay Ipad 2 waxayna la socotaa dib u dhac yar, wax cabsi leh ma leh. Salaan!
Waxaan ku rakibay macruufka 9-ka xoqitaankeyga iPhone 6 plus oo hadda waa mid aad u dareera oo aan lahayn jerks.
Waxaan kula talinayaa kuwa haysta iPhone 5S / iPhone 5 inay ku rakibaan iOS 8.4.1 xoqida maxaa yeelay iOS 9 waa laggy, waxaan kugula talinayaa inaad sugto ilaa nooca 9.1
Laakiin maxaad ku leedahay waalan ????
Waa hagaag, 5-ta sano waxaan ka fiicanahay sidii hore weligoodna batteriga ayaa waqti dheer sii jiraya.
Iphone 5S ayaa loo cusbooneysiiyay macruufka 9 8.2 ka dib, iyo haddii ay ahayd mid jajaban, wax cabsi leh ma leh.
Waxaan qaaday tallaabooyinka lagu faahfaahiyay qodobka waxayna umuuqataa inay shaqeynayaan, waa inaan sugnaa inta ka harsan maalinta, haddiiba ay dhacdo, laakiin hey, waa wax Apple ay ku hagaajin doonto haa ama haa 9.0.1.
Laakiin maxaad ku leedahay waalan ???
Tani halkan ma aadi lahayn.
Hagaag, hadaad kaliya kicinayso ikhtiyaarka si loo yareeyo daahfurnaanta, dib u dhaca ayaa lagu tijaabiyay iPhone 6 Plus laakiin tani waxay ka dhigeysaa inay qaadato tayada muuqaalka, (daahfurnaanta ogeysiisyada ama xarunta xakamaynta way baaba'aysaa, gebi ahaanba way soo baxdaa madow) Waan necbahay waxaan u maleynayaa in qalabku uu u jajaban yahay waxqabadka tan iyo markii aad joojiso yareynta daahfurnaanta dib u soo noqoshada waxaan si dhab ah u tixgelinayaa inaan ku laabto macruufka 8.4
Haa tan iyo markii aan cusbooneysiiyo LAG-gaan waa la ii soo bandhigay
Waxaan sameyn doonaa waxay yiraahdaan, fiiri sida ay wax u socdaan
Maya, ma shaqeyso. Waan sameeyay sida ay yiraahdeen jerksuna had iyo jeer way sii socdaan
Isla waxbaa igu dhacay aniga, xitaa dib u soo kabashada xoqida iyo adigoon rakibin kaydinta, habka "lag" loo xalliyey waxay ahayd "dib u soo celinta qaabeynta oo dhan" goobaha
Miyaad ula jeedaa "dib u dejinta dejinta" ama "nadiifinta waxyaabaha ku jira iyo dejimaha" oo aad dib u dhigtaa wax walba?
Dhibaatada, inkasta oo aadan rumaysan inay tahay xusuustii nacaladda ee RAM! 1Gb !!! kuma filna intay le'eg tahay tufaaxa ku adkaysanaya inuu dhahayo haa ... waxaan ku haystaa iOS9 iphone 6 Plus iyo iPad air 2 oo leh 2Gb oo Ram ah farqiguna waa abysmal !!! Waxaad arki doontaa in iOS9 si fiican ugu socdo iPhone 6s oo waliba leh 2Gb Ram ... Taasi waa dhibaatada nacaladda leh! Sidee ayay uga gurguuranayaan Apple in ay haysato tiknoolajiyad ku filan oo ay ka dhigtay iPhone 5 2 Gb oo Ram ah ma aysan dhigin illaa iyo hadda, taasoo ka dhigeysa iPhone 6 kan ugu saameynta badan inuu yahay aaladdii ugu dambeysay uguna dambaysay! !!
IOS 9 wuxuu qufulaa ipad iyo iphone waa qashin
Ku jawaab dhthrh
Waa wax aad looga xumaado inay tahay inaad taas sameyso si qalabku dhaqso ugu socdo. Taasi waa dhibaato nooca x.0 ah, marka waa inaan sugnaa midda xigta oo cayayaan ku nadiifin doonta nabadgelyo buuxda.
Waa la xaliyay.
Waxay ahayd inaad waqti siiso.
GUUL iyo dulqaad.
Si yaab leh ayuu uga shaqeeyaa ipad mini 3 😀
Ku jawaab daab15
Waxaan ku hayaa iPad 2 waxayna la mid tahay macruufka 8.4.1
Waxaan sameeyay tillaabooyinkan anigoon wali akhrin meelkasta kahor iyo dib udhaca yar ee kudhaca shaqooyinka badan iyo markii laxaliyay iyo furitaanka codsiyada laxaliyay.
Taasi waa haddii whatsapp-ka iphone 5 gebi ahaanba la xiray uu qaadanayo in ka badan 2sg laga bilaabo shaashadda madow illaa muujinta arjiga
Waxaan cusbooneysiiyay ipad 3 iyo iPhone 5, sida ipad 3 anigu kuma talin karo gabi ahaanba, waa mid aad loo dhiirigaliyay, waa inaan soo dejiyaa.
Marka laga hadlayo iPhone 5, xoogaa ayuu gaabinaa laakiin isbeddelka si dhib yar lama dareemi karo, waxaan uga tagay macruufka 9.
Carlos Vazquez sawir-haye dijo
Waad salaaman tihiin, dhibaato kale ayaa i haysata mana ogi inay cusbooneysiinta sabab u tahay, waxaan isku dayaa inaan dhaqaajiyo xogta dalab kasta wayna hawlgashaa laakiin waxaan ka baxaa liiska si aan u dhaqaajiyo oo aan u joojiyo ma sii ahaanayo mid firfircoon, qof ayaa i caawin kara aniga xoogaa waan quusanayaa!
Ku jawaab Carlos Vazquez
Waxaan casriyeeyay ipad 2 hadana safari si joogto ah ayuu u burburayaa. Waxaan isku dayi doonaa inaan soo celiyo qalabka
On Iphone 4S oo leh IOS 9 dhalaalka ayaa ah mid aan la xakamayn, wuu yareeyaa wuuna kordhayaa oo keliya.
Ku jawaab Gol
comanda shirkadaha dijo
Jawaabtu way fududahay. IOs waa nidaam xadidan oo xadidan, sababo laxiriirta barnaamijyada iyo xadeynta qalabka iyo tayada hoose ee qaybaha iphone (horeyba waan u ogaanay caydeeda barnaamijka ceeb la'aanta ah ee kuwa bixiyay lacag dheeri ah), nidaamka qalliinka ee taleefanka inuu ku shaqeeyo waa inuu noqo mid xaddidan, markaa ma samayn karto waxyaabo sidan u fudud oo ay leedahay Android qarniyo, sida wareejinta nooc kasta oo faylal ah iyada oo aan loo baahnayn iTunes, adoo adeegsanaya terminaalka sida qaybta wax lagu kaydiyo, usb otg, feylasha lagu wareejiyo bluetooth qalab kasta, ama si fudud barnaamijka whats naftooda ayaa isku diraa markay calaamadda lumiso oo ay soo kabato !!!!!!! Absurd haha. Hagaag, iOskan waxay isku dayeen waxqabad badan! Bal qiyaas, shaqooyin badan oo ku saabsan taleefan hoose, oo leh wan weyn iyo processor gaabis ah iyo kaliya 2 koronto. Waa hagaag, daahitaanku wuxuu u yimid wixii dhici lahaa, illaa Apple uu go'aansado inuu sameeyo taleefanno tayo leh oo uu joojiyo adeegsiga agab rakhiis ah, oo aan u laabanayn kaliya isagoo ku ridaya jeebka surwaalka
Ujawaabi comander-ka shirkadaha
Waan ku faraxsanahay khibradeyda waxaan ku rakibay ios9 qalabkeyga 2; iphone 5s iyo iphone 6plus, waxaan ku maraa qaybo:
- Taleefanka Iphone 6 oo lagu daray: Waxaan dareemayaa waxoogaa / jerks markaan riixayo badhanka guriga si aad ugu laabato shaashadda guriga, mararka qaar wicitaanada ama Whatsapps ima maqlaan, sida haddii ay aamusaan, arrinta batteriga maxaa yeelay ficil ahaan waa isku mid.
- Iphone 5s: waxaa jira waxyaabo aad uga yar ama jerks badan 6 plus, taas oo aanan fahmin maxaa yeelay 6 plus waxaa loogu tala galay inuu heysto processor ka fiican, waxay u dhacdaa si la mid ah mararka qaar wicitaanada soo dhaca iyo WhatsApp ma soo garaacaan, the baytarigu wuu sii yaraadaa.
Waxa aanan uur qaadin ayaa ah in nooc kasta oo macruuf ah oo aan rakibno ay noo sheegaan ama
nagula tali inaanu fureyno ikhtiyaariyada taleefanka si ay sifiican ugu socoto oo u yeelato waxqabad fiican iyo waxyar, iyadoo leh madaama aan haysto 6plus moodalkii ugu dambeeyay, waa taasi maya, sababtoo ah hadaanay ahayn maxaan u doonayaa shaqooyin badan ama saamayn badan hadii hadhow ay ii sheegaan in la furo
badh, aad u xun Apple, macruufka 9.1 horeba, in dhammaan khaladaadkan la saxo.
Ku jawaab Alberto Carmona
Ma ahayn inay wax yareyso! "Kaliya isaga ku farax", sida haddii aad qiil u hesho Apple ...
Waa inay hagaajiso khibrada isticmaalaha. Tani had iyo jeer waxay ahayd kiiska adduunka "ka baxsan Apple."
Waa hagaag. Goor dhow ama goor dambe ayaad arki doontaa.
Salaan ka timid isticmaale hore.
Juan Andres Garcia Gamboa dijo
Waxaan hayaa iPhone 5C, si daacadnimo ah, wax walba waxay ku shaqeeyaan si fiican iOS 9 marka laga reebo Iftiiminta iyo WhatsApp, gaar ahaan markaan qoro oo aan tago qadka xiga, waa laygu dhacaa kumana sii socdo illaa dhawr ilbidhiqsi ka dib, laakiin waxay sii socotaa muddo dheer Waqtiga, sida marka aan farriin ugu diro whatsapp, waqti ayey igu qaadataa in la keeno maxaa yeelay way ku sii dheggan tahay waxna kama qaban karo shaashadda. Ma jirtaa wado lagu saxo taas? Qof kasta oo kale ayaa dareemaya isku mid? Maxaan sameyn karaa, maadaama dib u dhacani uusan raaxo lahayn.
Ku jawaab Juan Andrés García Gamboa
Waxba. Waxaa ugufiican in la joojiyo barnaamijyada dhibaatooyinka keena.
Oo la bakhtiiyey si ay u sii dheeraato.
Waxay ka shaqeysay taleefankayga iPhone 6!
Su'aal: Ma jirtaa waddo loogu laabto muraayadaha hore ee daaqadaha badan?
Kuma shaqeynayo taleefankayga iPhone-ka, wixii talo bixin ah oo kale?
Waxaan hayaa iphone 6 ka dib markaan cusbooneysiiyay dib u dhaca ayaa u muuqday! Waxaan isku dayay xalka wayna shaqeysay, waxaan rajeynayaa inay sii jirto! Mahadsanid
Sida loo soo galiyo fiidiyowyada HD iyo sawirrada Facebook
IOS 9 Lost Mode wuxuu si otomaatig ah u daaraa habka awoodda hooseeya